Nigeira: Jaridda kabista shidaalka. - BBC Somali
Nigeira: Jaridda kabista shidaalka.
12 Maajo 2016
Dowladda Nigeira, ayaa shalay ku dhawaaqday in ay jareyso kabista shidaalka.
Hadal ka soo baxay dallad ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha Nigeria, ayey ku sheegeen in ay ka hor'imaanayan kororka iyo jarista kabka dowladdu ku sameyso shidaalka.
Jawaabta ururada shaqaalaha oo deg deg ah, ayey sheegeen in jaristaas iyo kordhinta qiimaha shidaalka ee halka dhinac ah ay ka dhigan tahay inta ay la egtahay dabacsanaan la'aanta xisbiga dowladda. Isku day lagu jarayay kabista shidaalka sanadkii 2012kii, ayaa keenay dibadbaxyo looga horjeeday dowladda taas oo keentay in ay ka laabato go'aankeeda. Waxaana muuqda calaamado taa la mid ah.
Dareenka in laga dibadbaxo arrintaasi, ayaa ka muuqda dhammaan Nigeira, waxaana jirta su'aal dadku isweydiinayaan oo ah awoodda ay waqtigan u leeyihiin ururada shaqaalaha in ay go'aanka dowladda joojiyaan.